कहिले समात्ला शेयर बजारले फेरी लय ? - Nagarik Today
होम » कहिले समात्ला शेयर बजारले फेरी लय ?
सोमबार शेयर बजारमा ११४ अंकको अत्यासलाग्दो गिरावट आएपछि धेरै लगानीकर्ताले एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्- अब नेप्सेले फेरी कहिले लय समात्ला ? नेपालको पुँजी बजारलाई सैद्धान्तिक आधारमा विश्लेषण गर्न त गाह्रो छ तापनि अब शेयर बजारको यात्रा कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न चाहिँ नसकिने अवस्था छैन। सबैभन्दा पहिले सोमबार किन यस्तो ठुलो गिरावटको सामना गर्न पुँजी बजार बाध्य भयो भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ :
सामान्य लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा थियो- सोमबार संसदबाट बजेट पारित भएपछि सरकारको खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ। र, त्यस सँगै घट्दो शेयर बजारमा नयन उत्साह आउने छ। तर, आम अपेक्षा विपरीत जब सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गर्‍यो त्यसै बेला देखी नेप्से परिसूचक तल झर्ने क्रमले झन् तीव्रता पायो।
यस्तो किन भएको हो भने बजेट पारित भए पनि अहिले नै बजारमा पैसा आउने लक्षण छैन। बैंकहरु तरलता अभावको चरम सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्। दुई दिनको सार्वजनिक बिदापछि सोमबार खुलेका बैंकहरुले एकै पटक ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ स्थायी सुविधा चलाएको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन आफ्नो कारोबारमा सहजता थप्न बैंकहरुले एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ओभरनाइट रिपो उठाएका छन्। उता अन्तर बैंक सापटी ब्याजदर नै सोमबार ४.९८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
जब बजारमा नगद नै छैन भने शेयर बजारमा कहाँबाट लगानी हुने ? त्यस माथि यो आश्विन महिना हो र सबै ऋणीहरूले त्रैमासिक ब्याज बुझाउनु पर्ने बाध्यता यस बेला थपिएको छ। बैंकको ब्याज र किस्ता बुझाउन समेत शेयर नै बेच्नुपर्ने अवस्थामा रहेका लगानीकर्तामा कतै बजार अझै तल झर्ने त होइन भन्ने त्रास बढेको देखिएको छ।
त्यसबाहेक बजारमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताको गतिविधिले पनि अब नेपालको शेयर बजारलाई प्रभावित पार्न थालेको छ। उनीहरू धेरै जसो आसन्न चाडहरू दसैँ र तिहारको तयारीमा लाग्न थालेका छन्। त्यसका लागि खर्चको जोहो गर्ने काममा लागेका त्यस्ता साना लगानीकर्ताले बजारबाट पैसा झिक्ने क्रममा समेत बजारमा शेयर मूल्य घटेको देखिन्छ। यसरी बजारका आन्तरिक कारणले नै ‘प्यानिक’ बनेर बाहिरिने क्रममा रहेका साना लगानीकर्ताको कारण यस्तो ठुलो गिरावट आएको देखिन्छ।
बजार घट्नुका अन्य आधारभूत पक्षहरू हेर्ने हो भने सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। जसले गर्दा स्थायित्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था छ। उता सर्वोच्च अदालतले एमालेबाट पार्टी फ़ुटाएका सांसदहरूको विषयमा विचाराधीन मुद्दामा केही भनिसकेको छैन। बल्ल हेर्दा हेर्दैको अवस्थामा पुगेको सो मुद्दामा यदि निवेदकको पक्षमा फैसला आयो भने फेरी सत्ता गठबन्धनमा ठुलै उथलपुथल हुने देखिएको छ।
यस्तो राजनीतिका अस्थिरता बिच मुलुकको आर्थिक गतिविधि नयाँ उत्साहका साथ अगाडी बढ्ने सम्भावना धेरै नै कम देखिएपछि कतिपय सुझबुझ भएका लगानीकर्ता समेत बजारबाट बाहिरिएर बरु बैंकमा उच्च ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप पो गर्ने हो कि भन्ने सोचमा पुग्न थालेको देखिएको छ। बजारको यस्तो मनोभावलाई पछिल्ला दिनमा भएका कारोबारको प्राविधिक विश्लेषणले समेत पुष्टि गरेको छ। सोमबार बजारको चार्टमा रातो लामो मारुबुजु बनेकोले उच्च बिक्री चाप रहेको बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको हाल बजारबाट बाहिरिन चाहने लगानीकर्ता धेरै छन् भन्ने प्रमाण हो।
के भन्छन् प्राविधिक विश्लेषक
सोमबार बजार घट्नुमा अर्को मुख्य कारण भनेको असोज १ गते देखी लागु हुने गरी सबैजसो बैंकहरुले बढेको ब्याजदर पनि हो। अब शेयर बजारबाट पैसा झिकेर बरु तीन महिना भए पनि मुद्दती खातामा निक्षेप गर्ने र बजारलाई केही समय हेर्ने मानसिकता समेत बढेको देखिएको छ। बोलिंगर ब्यान्डका आधारमा प्राविधिक विश्लेषण गर्दा पनि हाल अप्पर ब्यान्ड र लोअर ब्यान्डको दूरी पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले बजारमा उच्च उतारचढावको सङ्केत गर्छ भने लगानीकर्ता केही समय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको भन्ने देखाउँछ ।
प्राविधिक रूपमा नै हेर्दा गएका ५ दिनको कारोबारमा अढाई सय भन्दा बढी अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेकोले बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ता कुनै पनि बेला हाबी हुन सक्ने देखिन्छ। यदि त्यस्तो भयो र अल्पकालीन लगानीकर्ताले घट्दो बजारमा लगानी गर्ने हो भन्ने मान्यतालाई समाते भने बजार थामिने सम्भावना भने देखिन्छ।
प्राविधिक विश्लेषकहरुले बजार लगभग २६०० को विन्दुमा आएर हाल देखिएको अहिलेको करेक्सन सकिने सम्भावना रहेको बताइरहेका छन्। त्यसैले अहिले धेरै नै आत्तिएर बजारबाट बाहिरिने क्रम लगानीकर्ताले रोक्न सके चाँडै नै बजारले फेरी सकारात्मक गति समात्ने सम्भावना देखिन्छ। तर, धेरैले भन्ने गरेका छन्, बजार २५ सयको बिन्दु वरपर केही समय रहने छ।